Chitsva chiitiko chinonetsa paApple Watch kune vashandi | Ndinobva mac
Chitsva chiitiko chinonetsa paApple Watch kune vashandi
Kana paine asingasviki mavhiki maviri ekuenda kupera kwaNdira, tinovimba watosangana ne Ndira yakasarudzika chiitiko chinetso. Iwe uchine nguva, hongu, asi kana zvisiri, hatizive iyo inotevera ichave iri nekuti Apple ichavhura Mushandi-Chete Dambudziko munaFebruary iyo yatinoziva nezvayo.
Uku kupokana chete kune vakasarudzwa veApple, hakusi kutsva. Segore rega, Dambudziko rinotangwa revashandi veApple vane Apple Watch. Mubairo kunze kwekugara muchimiro uchauya uri muchimiro chehembe.
T-sheti yevashandi vanosangana nedambudziko
Dambudziko rinounzwa naApple remwedzi uno waKukadzi, harisi chinhu. Vashandi vanofanirwa kuvhara yega yega mhete, kufamba, kurovedza muviri uye maawa akamira, zuva rega rega remwedzi waKukadzi. Zvakaipa gore rino mwedzi uno une mazuva makumi maviri nemapfumbamwe 😉
Vanokunda vanogashira t-sheti semubairo kuti kumberi kwayo iwe unogona kuverenga 2020 silkscreened nemavara uye maumbirwo ayo maringi matatu aripo.
Uye zvakare, avo vanozviwana vanogashirawo pini yegoridhe uye vangave vari muchikamu chesimbi imwe chete. Vashandi vasina kutevera dambudziko, asi vanga vari Ivo vachakurumidza kunogamuchira pini yesirivha kana yendarira, zvinoenderana nemazuva avasina kukwanisa kuvhara.
Aya makwikwi ari emukati chete. Hatizive kana Apple ichatanga chinetso chakakosha mumwedzi waKukadzi, asi zvingave zvakanaka, nekuti chokwadi chinofanira kutaurwa, Inokurudzira zvakawanda kuti urambe uchishingaira.
Dambudziko raNdira harina kunyanya kuoma kana tikaritenga neiro richava nevashandi. Vhiki chete ichivhara mhete dzose nhatu. Zvingave zvakanaka kana Apple ikapa mibairo yakafanana kune avo vashandisi. Semuenzaniso, zvinoitika kwandiri kuti ivo vaizopa shati yakafanana kune avo vakapedza rimwe rematambudziko aripo: Vhara zvindori mazuva mazana matatu nemakumi matatu nemashanu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chitsva chiitiko chinonetsa paApple Watch kune vashandi
Zvinyorwa zvitsva paApple TV +: "Anodiwa Apple"